Zuva Idzva muNassau: The Reimagined Sandals Royal Bahamian Inovhurazve Kutevera Multi-Miriyoni Dollar Shanduko |
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Bhahamasi » Zuva Idzva muNassau: Iyo Inofungidzirwa Patsva Sandals Royal Bahamian Inovhurazve Kutevera Multi-Mamirioni Madhora Shanduko.
Zuva Idzva muNassau: Iyo Inofungidzirwa Patsva Sandals Royal Bahamian Inovhurazve Kutevera Multi-Mamirioni Madhora Shanduko.
Hutsva Hurukuro-Inosanganisirwa Chiitiko Chinoratidza muMara uye Tsika yeBahamas
Iko kuhwina-kuhwina, Luxury Included® Sandals Royal Bahamian Resort uye Offshore Island yakagamuchira vaenzi vayo vekutanga nhasi zvichitevera kugadziridzwa kwemamiriyoni makumi mashanu neshanu emadhora, yekutanga yezviitiko zvakakosha mugore rino rekurangarira makore makumi mana rekurangarira Sandals Resorts brand. Iri pa 55 sprawling acres, the 40-room Sandals Royal Bahamian inombundikira mweya uri nyore weBahamas kupinza zvine hungwaru zvese zvinobata bata - kubva pa pastel pink yeflamingo kusvika kune mavibe echinyakare Junkanoo.
Kubva kubhasking muBeachfront Swim-Up Butler neClub Level Suites ingori nhanho kubva kunyanza kuenda kunonakirwa mitsva yezvekudya kubva kumaresitorendi gumi nenhatu, huchokwadi hunosangana neumbozha panguva yega yega yeSandals Royal Bahamian chiitiko.
"Iyo itsva Sandals Royal Bahamian inosanganisira nguva itsva yekufamba, ichikoka vaenzi vedu murudo kuti vabatane netsika ine hukama, zvishamiso zvechisikigo, uye tsika dzechokwadi dzeBahamas yakanaka - uyezve vanobatana zvakare," akadaro Sandals Resorts Executive Chairman. Adam Stewart. “Tine nhoroondo refu muBahamas inodiwa uye inongova imwe yenzvimbo dzakanakisa paPlaneti Pasi. Ndizvo zvakakwezva muvambi wedu uye baba vangu, Gordon 'Butch' Stewart, kune iyi yakanaka mamiriro makore makumi maviri nematanhatu apfuura. Takawedzera zvinhu zvakakosha munzvimbo yese yekutandarira kuti ape nhaka yake kune marongero atakagadzira pano. Resitorendi yedu itsva yeButch's Island Chop House uye iri padyo naVaB B's bar, semuenzaniso, vese vanosimudza musoro kune rudo rwake rwegungwa, uye kunyange hembe dzake dzebhuruu nechena dzine mitsetse dzakashanda sekufemerwa kwekunaka. KuSandals Royal Bahamian, tinokudza nguva yedu yakapfuura, tichishamisa vaenzi vedu nenzira itsva. "
An Island Village Painted in Pastels, Swim-Up Suites Matanho kubva kuBeach uye Zvimwe
The itsva Island Village, inoumbwa nedzimba dzakazvimiririra dzakatumidzwa zita renzvimbo dziri kure dzeBahamian, dzinomiririra dunhu reBahamas - muunganidzwa wenzvimbo yekuenda inoyevedza pinks, blues uye chena marevereri, ane shiplap, ane mitsetse awnings, uye mamwe ma touch anogadzira chic, asi akasununguka ambiance. Butler Villa Suites imba yega yega dziva uye kunze Tranquility Soaking Tubs™.
Yakazorodzwa East uye West Bay nzvimbo dzekugara dzinopa hurongwa hwakasiyana-siyana hwemakamuri uye suite zvikamu, zvinosanganisira beachfront Butler Suites muEast Bay, uko itsva Infinity Swim-Up dziva rinogumira ipapo panotanga jecha. Dziva nyowani zero-yekupinda Swim-Up inombundira nzvimbo dzepasi dzeWest Bay tower, ukuwo Penthouse Love Nest Butler Suites inoratidza panoramic yegungwa maonero kubva pavharanda repachivande. Neutral color palettes uye fenicha yehuni zvinogadzira yemazuva ano chic dhizaini inosimbisa zvinoyevedza yebhuruu gungwa reCaribbean mhiri.
Kunakidzwa neBahamas uye Kupfuura
Sandals Royal Bahamian inokwidziridza Nassau's culinary chiitiko ne 13 nyowani restaurant concepts. Vaenzi vanogona kunzwa mutinhimira wemumhanzi uye kunakidzwa nePan-Caribbean spice paKanoo - pfupi yeJunkanoo - uko "Brasserie 30" à la carte lunch menyu yakagadzirirwa kuendesa chiitiko chemasikati mumaminetsi makumi matatu kana pasi, kuti idzoke nekukurumidza. kudziva kana kumahombekombe. Yakashongedzwa nepingi uye girinhi yakafemerwa neminhenga inoyevedza yeshiri yenyika, La Plume inopa yakanakisa chikafu cheFrance mumhepo yazvino. Mimwe miedzo inosanganisira steak uye zvegungwa zvinonaka paButch's Island Chop House, mari inofadza yeBritish kuThe Queen's Pearl, Southern Italy favourites kuTesoro, uye sushi itsva paSoy. Marori matatu eclectic gourmet echikafu achafadza vashanyi nezvinotapira uye kofi pa Sweets n Tings, yakafemerwa munharaunda yeBahamian fusion uye nyowani yegungwa pa Coco Queen, uye kumwe kutsva pazvinyakare zveItaly pa Bahama Mamma Mia. New siginicha cocktail yemamenu anogadzira mukana wakakwana wekurova kune zvitsva zviitiko zverudo, seGlass Flask Banana Bread Old Fashioned paVaB vatsva.
Tropical uye Trendy: Iyo Yese-Itsva Coconut Grove
Upenyu hwemahotera hunotamba kubhiti itsva pamwe nekuwedzera kweCoconut Grove, imba yekutandarira yakasvibira uye yakafararira pamhenderekedzo yegungwa yakafukidzwa nemichindwe yekokonati ichizunguzirwa kumhepo yeBahama, yakanakira kutandara kwemasikati. Nzvimbo yepamba yemarori ezvekudya matsva, ayo anovhurwa kubva 11am - 11pm, chic pekugara sarudzo pamwe nemimhanzi inorarama & varaidzo kusvika manheru manheru inoita Coconut Grove nzvimbo yayo yega.
Mahombekombe akasiiwa uye ane mavara ecoral reef akamirira pachivande chitsuwa chakavanzika, Sandals Barefoot Cay, kupukunyuka-mukati-kwekupukunyuka kunowanikwa mamaira imwe chete kubva kumahombekombe. Vakaroorana vanogona kufamba nechikepe muchikepe chitsva cheLove Runner chehotera uye vanopedza zuva rose vachibatana pamhenderekedzo yakanyarara iine pool bar ine swings, infinity-edge jacuzzi, shawa yekunze uye resitorendi nyowani, Aralia House, ichipa chikafu chitsva chegungwa kubva pachikepe kuenda patafura uye. zvechokwadi zveCaribbean zvinonaka.
Red Lane® Spa yekutandarira inotambira vaenzi vadzokera kunzvimbo nhatu dzakanyarara: Main Spa, Day Spa uye Offshore Escape - Zen Garden paSandles Barefoot Cay. Zvivako zveSpa zvinosanganisira saunas mbiri uye mbiri yekudziya, inopindirana nemenu yakawedzera yemasevhisi ayo zvino ane maviri matsva evachati tsika mukupemberera Sandals' 40th anniversary: ​​Rudo & Kuvimba uye Nokusingaperi muRudo.
Coveted Conch uye Zvimwe Zvinokurudzira
Matatu matsva ega ega ekurudziro emuchato anotora iyo yechokwadi Bahamian vibe. The Conch Pearl Wedding inoshandisa siginecha yepink spiral shell semutauriro, nepo shangu-inosarudzika Barefoot Wedding yakaiswa pajecha panzvimbo dzakasiyana siyana dzinosanganisira chitsuwa chakazvimiririra. Muchato weBahamian wakaiswa mubindu rakasvibira rinopisa, uchifambisa vashanyi kune ruzha rwekwaya yevhangeri yeBahamian. Tsika yekuridza konji inopedzisa zviitiko zvevaenzi uye michato, kugashira rudo uye rombo rakanaka kune ruzha rwerake uye scrape mimhanzi.
Kuti udzidze zvakawanda uye nebhuku rekugara kune itsva Sandals Royal Bahamian, shanya sandals.com/royal-bahamian.
Sandals® Resorts inopa vanhu vaviri vari murudo zvakanyanya kudanana, Luxury Inosanganisirwa® zororo ruzivo muCaribbean. Iine gumi nematanhatu inoshamisa maratidziro emahombekombe egungwa muJamaica, Antigua, Saint Lucia, Iyo Bahamas, Barbados, Grenada, uye nzvimbo yegumi nenhanhatu inouya kuCuracao Spring 15, Sandals Resorts inopa yakawanda yemhando inclusions kupfuura chero imwe kambani yekushambadzira papasi. Siginecha Rudo Nest Butler Suites® yeiyo yekupedzisira mune zvakavanzika uye sevhisi; vatengesi vakadzidziswa neGuild of Professional English Butlers; iyo Red Lane Spa®; 16-Nyeredzi Global Gourmet ™ yekudyira, kuve nechokwadi chepamusoro-pasherufu doro, premium waini, uye gourmet yakasarudzika maresitorendi; Aqua Nzvimbo nehunyanzvi PADI® chitupa uye kudzidziswa; inokurumidza Wi-Fi kubva kumahombekombe kuenda kuimba yekurara uye Sandals Yakasarudzika Michato ese eSandals Resorts anosarudzika. Sandals Resorts inovimbisa vaenzi runyararo rwepfungwa kubva pakusvika kusvika pakuenda ne Sandals Platinum Maprotocol eUtsanana, matanho ekambani akawedzerwa ehutano nekuchengetedza akagadzirirwa kupa vaenzi chivimbo chakanyanya pavanenge vari pazororo muCaribbean. Sandals Resorts chikamu chemhuri-yemhuri Sandals Resorts International (SRI), yakavambwa nemushakabvu Gordon “Butch” Stewart, iyo inosanganisira Beaches Resorts uye ndiyo inotungamira kambani yeCaribbean yese-inosanganisirwa nzvimbo yekutandarira. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Sandals Resorts Luxury Included® musiyano, shanya sandals.com.
Beach Mahombekombe Resorts Caribbean Iceland Junkanoo Platinum nzvimbo yorudekaro Sandals Resorts Spa muchato Wi-Fi Zen